Nri 5 ị na - enweghị ike ịkwụsị ịnwale na Buenos Aires | Akụkọ Njem
Otu n'ime isi obodo Latin America kachasị mma bụ Buenos Aires. Ọ bụ maka ndị ya, maka n'okporo ámá ya, ụlọ ya, oghere ndụ ndụ, gastronomy na ọrụ ọdịnala. Ọ bụ n'isi ndụ ọdịnala, ehihie na abalị, nke mpaghara a.
Abụ m otu n'ime ndị ahụ na-ejikọta ezumike na ezumike gastronomic. Nke ahụ bụ, Achọghị m ma ọ bụ chọọ iri otu nri n'ụlọ. Kama nke ahụ, ọ masịrị m ịnụ ụtọ ọhụrụ n'ihi na echiche a bụ nkenke iji nwee obi ụtọ pụọ n'ụlọ iji nwee ekele maka etu ụwa si buru ibu ma zee ọtụtụ. Yabụ, Mgbe ị gara Buenos Aires, ndụmọdụ m bụ ka ị ghara ịhapụ obodo ahụ na-anwale nri ise a.
2 Milanesas na fries
3 Onyinye na pizzas
4 Dulce de leche ego
5 Mmanya na biya
Nri achicha abughi ihe kacha mkpa na Argentina, ọ bụ eziokwu, mana ebe a bụ akụkụ nke ihe ọ ga - abụ Argentine. Mgbe oriri nke amịrị kwa n'isi Ọ na-agbadata kemgbe ọtụtụ afọ ma ka bụ otu n'ime ndị kachasị elu n'ụwa. O zuru ezu iji were ụgbọ ala ma mee njem site na Pampa iji hụ ehi ebe niile, n'etiti, kwa, ọtụtụ ubi soy (nkwado nke mbupụ ya ugbu a).
Argentzọ Argentine nke esi esi anụ bụ imi ya, Na unyi na / ma obu nkụ. Ndị ọkachamara na-a paya ntị nke ọma ụdị nkụ iji mee ihe na ọ bụ nnọọ ihe a na-eme emume «na-eme achịcha» Ọfọn, ọ bụghị naanị ilekwasị anya na nri. Ihe niile na-amalite site na ịzụta anụ, mmanya, achịcha, na-eme ka ọkụ ọkụ n'oge ka ọ nwee ezigbo olulu ma were nwayọ were ihe niile ka nsonaazụ ahụ wee dị mma.
Nkedo nke anụ, agụụ, matambre, mkpuchi mkpuchi, n'úkwù, ọkụkọ na nke gị ụtọ kacha mma: ndị achuras. N’ebe a, onweghi ihe anụmanụ lara n’iyi ka ị wee nụ ụfọdụ ihe ọma ụdị chinchulines (eriri afọ), akụrụ, gizzard, soseji na soseji ọbara. Onye isi ọ bụla nwere ụdị ya mana ọ nweghị ihe bara ọgaranya karịa lemon gizzards, akụrụngwa Provençal, soseji ọbara na walnuts na chinchulines crispy.
Ọ bụrụ na ị nwere enyi ma ọ bụ onye ọ maara nke na-akpọ gị ka ị gaa ebe a na-abeụ mmanya n’ụlọ ya, egbula oge. Ma ọ bụghị ya, enwere ihe ichi achịcha obodo niile. Ọ bụghị ha niile nwere otu ụdị anụ ka ị ghara ịga nke dị ọnụ ala. La Cabrera bụ ezigbo ụlọ nri, dịka ọmụmaatụ.
Milanesas na fries
Nke a bụ a ahụkarị ka ndụ efere, site na obere ụlọ oriri na ọ neighborhoodụ neighborhoodụ agbata obi, nke ndị nwe ya na-ejikarị. Mana ọ bụ ihe ama ama na ọ na-ahụkarị na menu nke saịtị mara mma. Ndi Milanese abughi ihe ozo mkpa efere, enwere otutu uzo nke ehi a nwere ike iji mee ya, akwa-sie akwa na achịcha bred. Nke ahụ na-eghe ma soro ya na akụkụ dị mma nke fries. Nri!
Na e nwere iche otú i nwere ike ịrịọ maka Milanese diri Neapolitan: na tomato ihendori, ham na gbazee cheese, ma obu Milanese na inyinya, na ihe niile na akwa eghe. Ọbụna mgbe ndị Argentina na-akwadebe ha n'ụlọ, ha na-agbakwunye pasili na galik na galik na ngwakọta akwa, ma ọ bụ basil ma ọ bụ obere mọstad.
Enwere ebe dị mma karịa ibe iji rie milanesas na fries? Ọ dị mma, ndụ ọ bụla bara uru n'ihi na ọ bụ efere nri. Ọ bụrụ na ị na-agagharị na mpaghara Palermo, nke kachasị mma maka ndị njem nleta na-eto eto, ị ga-ahụ na e nwere agbụ ụlọ ahịa a na-akpọ Ndị Milanesa Club. Nwere ike ịnwale ebe ahụ.
Onyinye na pizzas
Ọ bụrụ na anụ oriri na ọ isụ isụ bụ nnọọ Argentine, ọ na-abịa gaucho na Pampas na ime nke mba, pasta na piza Ndi Argentina ketara ha n’aka ndi nne na nna ha. Anyi aghaghi ichezo na Argentina bu obodo ndi si na Europe nile bia, karie Spain na Italy. Ndị (tali (70% nke ngụkọta ma e jiri ya tụnyere 40% nke Spanish), wee chịkwaa akwụkwọ Buenos Aires nke nri na ọtụtụ nri ha.
Eziokwu bụ na Enwere ọtụtụ ụlọ nri na-enye ezigbo achịcha na ha enweghị ọtụtụ ihe iji nwee anyaụfụ Italytali. Enwere ụlọ oriri na ọ withụ withụ nwere aha Italiantali nke a na-ahazi dị ka ndị ọkachamara, mana n'otu oge ahụ na ndụ ọ bụla ma ọ bụ obere ụlọ nri, nke ndị ọrụ na-eri nri ehihie, ha na-enye onyinye: noodles, cannelloni, gnocchi, lasagna, sorrentinos, ravioli. Ha juputara na cheese cheese, cheese obi na walnuts, akwukwo nri, ọkụkọ, ugu ...
Recommendfọdụ saịtị nwere ike ịkwado? Buyzụta na ịkwadebe n'ụlọ ị nwere ike ịga nke ọ bụla "Factorylọ ọrụ Pasta" nke na-ere pasta ọhụrụ site na kilo ma ọ bụ site na igbe. Onye isi nri Italiantali aha ya bụ Donato de Santis (onye bụbu onye Versf siri nri), ebiela n'obodo ahụ wee nwee ụlọ ahịa na ụlọ nri ya, Paradaịs kichin, na mpaghara Palermo. Restaurantlọ oriri na ọastaụ goodụ ọzọ dị mma dị na pasta bụ Parolaccia nwere ọtụtụ alaka, gụnyere otu na Puerto Madero. Mmadụ abụọ nọ ebe a nwere ike ịkwụ ụgwọ pesos 1000 Argentine na mmanya ọ XNUMXụ XNUMXụ.
Banyere Pizza ị gaghị ahụ ụdị pizza na-ahụkarị na ha na-ejere gị ozi na Italytali. Nke a bụ obere thicker You nwere ike ịtụ ya ọbụlagodi ọkara (ya bụ, elu). Enwere uto niile na oge ụfọdụ ị nwere nhọrọ nke ị sie ya na oven, nke ka mma. Tinye otu akụkụ nke fainá (chickpea mgwakota agwa n'otu ụzọ ahụ dị ka Pizza), na ịpị aka aka.
The Little Room, The Quatrains, Alaeze Ukwu, Angelin, The Pizza Empire, Guerrin, bụ ụfọdụ n'ime pizzerias kacha mma nke ọtụtụ ma ọtụtụ na e nwere na obodo. Ngwongwo a ma ama bụ Romario, ma eleghị anya ọ bụghị Pizza kacha mma mana ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mma.
Dulce de leche ego
Mgbe ọ bụ ngwụsị izu na oge tii ga-abịarute, ebe a na-eme achịcha / nri ụtọ na-amalite ijupụta na ndị mmadụ. Karịsịa n'oge oyi n'ihi oyi na-akpọ gị ka ị rie ụgwọ, dị ka ha na-ekwu gburugburu ebe a ka ụtọ buns na dị iche iche Efrata na flavors.
Na aha: enwere ndị nche, bọọlụ friar, puff achịcha achịcha, Neapolitans, croissants, churros na nhọrọ ndị ọzọ enweghị njedebe. Havefọdụ nwere ude achịcha, ndị ọzọ quince, mkpụrụ osisi na ọtụtụ n'ime ha nnọọ Argentine ụtọ nke ahụ bụ caramel. Agbanyeghi na Latin America enwere nsụgharị nke ụtọ a, Argentina ewerela nnukwu ndị na-emepụta ihe na ndị na-azụ ahịa. Enwere bọọlụ friar jupụtara na dulce de leche na otu croissants na Churros (Great Nchikota!, M nwere ike ikwu na ọ karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-Spanish).
Ihe oriri ọzọ na dulce de leche bụ alfajor. Enwere ike ịchọta ha na ebe a na-eme achịcha, nke na-aka ọrụ aka, mana ha jupụtara na kiosks na nnukwu ụlọ ahịa. E nwere ọtụtụ ụdị na ha bụ obere achịcha ma ọ bụ obere achịcha tinye na chocolate wee jupụta na dulce de leche.
Ezi ụdị? Ọfọn Havanna bụ kpochapụwo ọ fọkwara nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eti ya ihe. Ọ bụrụ n’ịgbalị, mee ya ka ọ bụrụ Havanna. Taa ụlọ ahịa ahụ aghọwo ọtụtụ ụlọ kọfị ka ị wee drinkụọ kọfị na gingerbread tọrọ ụtọ site n'ọtụtụ dịgasị iche iche ọ na-enye: mousse, ukpa, mkpụrụ osisi ...
Mmanya na biya
Ọ bụ ezie na ha abụghị nri nri, ha bụ mmanya abụọ na-ewu ewu na Argentina na Buenos Aires. A ma ama obodo Argentina na ụwa niile, karịsịa maka ya tọrọ ụtọ Malbek. E nwere ụdị ndị a ga-azụta na nnukwu ụlọ ahịa ahụ ma gbalịa n'ụlọ, dị ka Dadá, López, Estiba I, Callia, San Felipe ma ọ bụ Postales del Fin del Mundo, naanị ịkpọ aha ole na ole n'ime ndị nwere karama maka 100 pesos ma ọ bụ obere, mana n'ezie mmanya dị oke ọnụ karịa: Graffigna, Terrazas, Rutini, Catena, wdg.
Na usoro nke beers maka oge ugbu a bere biara a ɛbɛyɛ yiye no, wo ne no mmɔ nkɔmmɔ akpali nnọọ mmasị. Obere biya ndị na-eme biya bekee amalitela ịzụlite aka na ndị chọrọ ịmata ihe. Taa ụlọ ahịa ndị na-ekwekọghị ekwe na-ere biya biya mmanya na ụdị ole na ole apụla na niche ma bụrụ ndị amaara ama. Ọbụna ha enweela Ogwe nke ha. Sɛ sɛ wodɔ biara Antares, Berlin ma ọ bụ Patagonia.
Ezigbo mmanya maka nri abalị na ezigbo biya biya ọrụ Argentine iji soro ndị enyi nwee obi ụtọ. Ma ọ bụrụ na nhọrọ abụọ anaghị amasị gị nke ukwuu, ịnwere ike ịnwale mmanya ndị ọzọ dị na mpaghara dịka Fernet Branca na Coca-Cola.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Buenos Aires » Nri 5 ị na - enweghị ike ịkwụsị ịnwale na Buenos Aires